Lego 71031 Marvel ရှိုးပွဲနှစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်သောစတူဒီယို minifigure လား။
LEGO 71031 ဖြစ်သည် Marvel ရှိုးပွဲနှစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်သောစတူဒီယို minifigure လား။
11 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 242 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ကဗျာ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
ပထမဆုံး minifigures များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား နောက်ဆုံးပေါ် What If …? အပိုင်း။
Winter Soldier သည် minifigures ၁၂ ခုတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို Falcon နှင့် The Winter Soldier တို့မှရိုက်ထားသောဇာတ်ကောင်တစ်စုံကိုဖန်တီးသည်။ သို့ရာတွင်ဒိုင်းလွှားကိုင်ဆောင်ထားသောသူရဲကောင်းသည်ဒုတိယမြောက်ပြပွဲတစ်ခုကြောင့်စိတ်အားတက်ကြွစေနိုင်သည် Marvel Cinematic Universe တွင်ပါဝင်သောအထင်ကရဆက်စပ်ပစ္စည်းများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
What If ... ၏ပဉ္စမအပိုင်းအတွက် spoilers များကိုငုပ်ကြည့်တော့မည်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်စာမဖတ်ခင်အဲဒါကိုကြည့်ဖို့အားမနာပါနဲ့။
Bucky Barnes တွင်တွေ့နိုင်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို The Falcon and The Winter Soldier တွင်သူက၎င်းကိုအနည်းငယ်သုံးခဲ့သော်လည်း Captain America ၏ဒိုင်းလွှားနှင့်အတူ
တူညီသောဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သောစီးရီး၌အခြားသုံးကြိမ်ပါ ၀ င်သောအုတ်သည်စတိဗ်ရော်ဂျာနှင့်သူ၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကြောင့် Bucky နှင့်ပေါင်းရန်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Zombie Hunter Spidey နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် minifigure အဖြစ်ကိုယ်စားပြုထားသည့် Zombie Captain America ကဲ့သို့သောမရေမရာဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သောနောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Winter Winter Soldier သည်သူ၏သူငယ်ချင်းဟောင်းကိုဖြုတ်ချကာဒိုင်းလွှားကိုအမြဲတမ်းကိုင်စွဲခဲ့သည်ကိုမြင်ရသည်။ undead horde ဖြစ်သည်။
ဤဇာတ်ကောင်၏အခြားဗားရှင်းသည်စိတ်အားတက်ကြွစေသောအရာဖြစ်နိုင်သည် Lego ဇာတ်လမ်းတွဲများကိုသေးငယ်သည့်အကိုးအကားအဖြစ် The Winter Soldier ၏ minifigure အသစ်နှင့် Captain America ၏သင်္ကေတကိုထည့်ရန်ဒီဇိုင်နာများ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်များကို ကျော်လွန်၍
Bucky နှင့်ဒိုင်းလွှားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သည့်အရာကိုယုံကြည်ရန်သင်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ 71031 Marvel စတူဒီယို WandaVision နှင့် Loki အပါအ ၀ င်ပြပွဲများပေါ် မူတည်၍ စုဆောင်းရန် minifigures ၁၂ ခုကိုယခုရနိုင်သည်။ The Winter Soldier အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် artမင်းကိုကူညီဖို့ icle သူ့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ အဖြစ်တစ်ဦး အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ် ပထမစီးရီး၏ Lego Marvel သေးသေးလေး။
← LEGO Super Mario set အသစ်တွင်လျို့ဝှက်ချက်ရှိပါသလား။
LEGO Swing Ship Ride GWP အတွက်အချိန်ကကုန်ဆုံးနေပြန်ပြီ →